डा.बाबुराम भट्टराईलाई गोर्खा फिर्ता गर्नेहरु -Nagarikaawaj.com
डा.बाबुराम भट्टराईलाई गोर्खा फिर्ता गर्नेहरु
– पं. बाबुराम भट्टराई
कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको एउटा गीतले संसारका सारा मान्छेहरुको एउटै जाति हुने कल्पना गरेको छ । कतिपय अवस्थामा मैले मेरा बाबु पं. टीकाराम भट्टराईले विहानमा स्नान–ध्यानपछि भन्ने गरेको श्लोक सुनेर सोच्ने गर्थें–आहा, कति राम्रो भावना । जुन श्लोक यस्तो थियो–‘माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः । मानवा बान्धवाः सर्बे स्वदेशो भुवनत्रयम् ।’ ‘आमा मेरी पार्वती हुन् भने पिता महेश्वर हुन् ।
ससारका मानव जति मेरा बान्धव हुन् भने मेरो स्वदेश भनेको तीनै भुवन अर्थात् स्वर्ग, मत्र्य र पाताल हुन् ।’ यो श्लोकको भावना र कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको गीतको भावना हेर्नुहुन्छ भने श्लोकको भावना अझ माथि होला, कम छैन । कतिपय भावनामा अध्यात्म र भौतिक विज्ञानको समानता देखेर म आश्चर्य चकित हुन्छु । तर यता आएर भौतिकवादको कुरै नगर्नोस्, अध्यात्मवादले पनि मान्न नसक्ने कुरा आफूलाई निख्खुर कम्युनिष्ट मान्ने, भौतिकवादी मान्ने एमालेका कार्यकर्ताहरुले रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ का एमाओवादीका उमेदवार डा. बाबुराम भट्टरार्ईलाई ‘गोर्खा फर्क’ भनेर ‘फतवा’ जारी गर्दैछन् र उनीहरु भट्टराई यहा“बाट उठ्नुलाई संवैधानिक प्रावधानलाई ह्या“कुलाले मिचेको ठहर गर्दैछन् ।
हो, यदि उनले सवैधानिक प्रावधानलाई मिचेकै ठहर हो भने अदालत जानुपर्छ कि पर्दैन ? अनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल आदिले दुई ठाउ“बाट उमेदवार हु“दा संविधानलाई ह्या“कुलाले मिचेको नठहर्ने तर गत निर्वाचनमा एक पटक आइयु आइयुले एमालेले चुनाव जितेको ठाउ“लाई सदाको लागि आफ्नै विर्ता हो कि जस्तो गरी ‘त“ फलाना ठाउ“ जा’ भनेर प“जनी गर्ने एमालेहरु को हुन् ?
के यो क्षेत्र एमालेको बिर्ता हो ? विगतका निर्वाचनहरु हेर्ने हो भने पनि सदासदा एमालेले जितेको ठाउ“ त हैन यो ? कहिले नेपाली काग्रेसले जित्छ, कहिले एमालेले जित्छ, हु“दै आएको क्षेत्र न हो ? अहिले डा. बाबुराम भट्टराई आउ“दा आत्तिएर गरेको अनर्गल विचार–अभिव्यक्ति मात्र हो यो । म देशको सामान्य नागरिक हु“ । चित्त नबुझ्ने कुरा गरेको हु“दा नै यस प्रकारको जवाफ–सवालमा उत्रेको छु । मेरा कुरा चित्त नबुझे कसैले पनि प्रतिवाद गर्न सक्छ तर कुरा के हो भने डा. बाबुराम भट्टराई यस क्षेत्रमा आएर उमेदवार हुनु भनेको उनले गौतम बुद्धलाई सलाम गरेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
बरु एमालेले बुद्ध र लुम्बिनीलाई सलाम गर्छ कि गर्दैन मलाई शंका छ । कारण, ऊ त्यो पार्टी हो, जसले हिन्दू सम्राट्लाई दाम चढाएर सलाम गरेर आएको थियो । र, यो त्यो क्षेत्र हो, जहा“ विगतमा ७० हजार बौद्ध भिक्षुहरुलाई अवतारवादी अवधारणा अन्तर्गत राजकुमार विदूढवको नेतृत्वका हत्याराहरुले मारेका थिए । त्यसपछि नेपालबाटै बुद्ध धर्म हराउ“दै र क्रमशः अवतारीकरण हु“दै गएको थियो । राजा–महाराजाहरुको उदय र विस्तार हु“दै गएको थियो । र, त्यसैको चरम विकृत रुप शाही खलकको अन्तिम अवशेष बा“की थियो, जुन मूलतः माओवादी जनयोद्धाको बलिदानले गर्दा पराजित भएर इतिहासको गर्तमा पुगेको छ, कहिल्यै नउठ्ने गरी ।
वास्तवमा भन्ने हो भने एमाले त कम्युनिष्टको रातो झण्डा बोकेको रा प्र. पा नेपाल हो । गोर्खाका बाबुराम चाहीं गोर्खा जानुपर्ने अनि स्यांजाका विष्णु पौडेल जानु नपर्ने कस्तो व्याख्या हो ? यसरी कुनै थलोलाई मूल थलो र कुनै थलोलाई जान÷आउन नहुने थलोको व्याख्या हुने हो भने नेपालका तमाम वंश र व्यक्तिहरु कहा“ पुग्ने होलान् ? एमालेका भाइहरुलाई म आह्वान गर्छु आऊ, हामी सबै मध्य एशियाबाट आएका हौंं, यहा“ नबसौं । कसैले राहुल सांकृत्यायनका ‘मध्य एशिया का इतिहास’ र ‘राजस्थानी रनिवास’ पढेको छ ? कुरा चुनावको हो र विष्णु पौडेल पनि मेरी सौतेनी आमाका छोरा होइनन् तर कुरा के हो भने योग्यता र कार्यक्षमताको हिसावले डा. भट्टराई र पौडेलमा कुनै साम्य छैन । डा. बाबुरामको बोली उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम जताततै बिक्छ तर विष्णु पौडेल हद्दै भए मन्त्री होलान्, त्यत्ति हो ।
देशको लागि सोच्ने हो भने राजनेताहरु साधन हुन्, साध्य होइनन् । साधन योग्य छ वा छैन भनेर नै चुनाव हुने हो । एमालेका भाइहरुलाई विष्णु पौडेल साध्य भएका छन् । योग्यता हेर्ने हो भने डा. भट्टराई माक्र्सवादको व्याख्यानको लागि अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा बोलाइने व्यक्ति हुन् भने विष्णु पौडेलजीलाई नौतनवाको कलेजले पनि गन्दैन । नीतिवचनहरु भन्छन्–‘गुणी गुणं वेत्ति नवेत्ति निर्गुणी’ गुणीले नै गुण चिन्दछ, निर्गुणीले कहा“ चिन्दछ ? यदि बाबुराम गोर्खा जानैपर्ने जिरह हो भने विगतमा तराई–मधेस अन्दोलनका बेला पूर्वी तराईबाट कैयौ पहाडी मूलका मान्छेहरुलाई तराई मूलका नेपालीहरुले भगाएको कुरालाई पनि अनुमोदन गर्नुप¥यो । यो कुनै आसाम–नागालैण्ड होइन भने नेपालको कानूनले दिएको अधिकार अनुसार नै नेपालमा चुनावमा उठ्दा त्यत्रो आपत्ति नहुनुपर्ने भन्ने मेरो जिकिर हो । पार्टीका सैद्धान्तिकदेखि अन्य तमाम कुरामा तर्क गर्न हामी पनि तयारै छौ । सबैले आमाको दुध खाएर टाउकोमा केही सेतो पदार्थ लिएरै जन्मेका हुन्छन् भन्ने बुझ्नु लोकतान्त्रिक हुनु हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । अरु त भगवान् बुद्धले भन्नुभएकै छ, अप्प दीपो भव । आफै बत्ती बन । बुद्धले कुनै कुरामा पनि जबर्जस्ती गर्नु भएन । आलार कलामहरु कहा“ गएर भन्नुभएको थियो, ‘मैले देखें तिमीहरुले पनि हेर । म राम्रो छु, राजाको छोरो हु“ भनेर हैन, मैले भनेको कुरा सुनारले सुनलाई कसी लगाएर हेरेझै मेरा विचार हेर । आऊ आऊ स्वागतम् स्वागतम् ।’ बुद्धले स्वागतको संस्कार सिकाउनुभयो, अनि तपाईंहरु ?… भैगो भो धेरै नभनौ